Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण यस कारण अध्यक्ष प्रचण्ड भारतीय एजेण्ट भएको प्रष्ट !
यस कारण अध्यक्ष प्रचण्ड भारतीय एजेण्ट भएको प्रष्ट !
१६ असार २०७७, मंगलवार १७:२२
काठमाडौँ, ८ असोज । सरकारले वैकल्पिक विधिको पठनपाठन प्रक्रियामा आबद्ध हुन नसकेका विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यार्थीकै घरदैलोमा
काठमाडौँ, ५ असोज । काठमाडौँ उपत्यकामा अनलाइन शिक्षा शुःल्कमा एकरुपता बनाउने प्रयास थालिएको छ । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई दिएको
अनलाइन शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित बनाउन जोड
काठमाडौँ, २७ भदौ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले अनलाइन शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्